Mango ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းမှုအသစ် | Bezzia
မာရီယာ vazquez | | လက်ကိုင်အိတ်များ, ဖိနပ်
Mango သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်စုဆောင်းမှုမျှမက၊ ဒါဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်အပိုင်းပိုင်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်, ထိုအကြား, ခြင်းတောင်း, pleated အိတ်အိတ်, undercut သားရေဖိနပ်သို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထွက်မတ်တပ်ရပ်သော။
Mango ၏အဆိုပြုချက်အသစ်များအားမျဉ်းကြောင်း (၃) ချက်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ရေးစပ်တစ် ဦး ကပိုပြီးသဘာဝကတစ်ခု သဘာဝအရဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျှင်များနှင့်သားရေအပိုင်းပိုင်း။ ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အဖြစ်ပန်းပွင့် motif များနှင့်အတူစိမ်းလန်းစက္ကန့်နှင့်စပျစ်သီးကိုစတိုင်မှတ်သား။ နှင့်တတိယတစ်ခုကဂျင်နီအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ပုံရသည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ!
သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ၊ Mango ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်များသည်နွေရာသီအတွက်ဖြစ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျှင်များကဲ့သို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖိုင်ဘာအိတ်များသည်အအေးဆုံးသောနေ့ရက်များအတွင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုပြန်လည်ရရှိပြီး catalog ထဲသို့ပြန်သွားသည်။ သဘာဝတန်ချိန်အတွက်ကျစ်ဒီဇိုင်းများ.
သို့သော်၎င်းတို့သည်စွယ်စုံသုံးနိုင်သော်လည်းစုဆောင်းထားသည့်အထင်ရှားဆုံးအိတ်များမဟုတ်ပါ။ အိတ်များ, ပန်း motif နှင့်အတူ ruched အိတ်များနှင့်အသေးစားအိတ်အာရုံကိုအားလုံးခိုးယူ။ နှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုက်ညီသည့်ကြီးသောဂျင်နင်ဒီဇိုင်းများသည်သတိမပြုမိဘဲမနေနိုင်ပါ။
ဖိနပ် သရက်သီးများစုဆောင်းမှုအသစ်၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ အောက်ခံပြားများနှင့်အသားရေအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောအစိမ်းရောင်နှင့်ကုန်ကြမ်းအရောင်များဖြင့်တင်ပြကြသည်။ ဖိနပ်များနှင့်အတူဒေါက်မြင့်ခြေချောင်းလက်ချောင်းခြေနင်းများနှင့် velcro ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်အတူအခြားဒင်းနစ်အိမ်များသည်ထင်ရှားကြသည်။
အိတ်များ၊ ဖိနပ်များနှင့်ဖိနပ်များအပြင်သင်စုဆောင်းမှုအသစ်တွင်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် accesorios para el peloဦး ထုပ်များ၊ ဦး ထုပ်များ၊ ပန်းပွင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တောက်ပသောအရောင်များရှိသူများသည်အထူးသဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဂျင်နစ်ဝါဂွမ်းထည်တွင်အနိုင်ရသူအရေအတွက်ကများသော်လည်း စုဆောင်းမှုကိုသားရေခါးပတ်များ၊ နေကာမျက်မှန်များနှင့်ဇင့်အပိုင်းအစများနှင့်ရွှေသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရေးပါသည့် ၀ တ်စုံရတနာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » လက်ကိုင်အိတ်များ » Mango ဆက်စပ်ပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေပါ
နွေ ဦး ရာသီရောက်ရန်ခြေထောက်များကိုပြင်ဆင်ပါ